Ninkii Sweden ugu kufsiga badnaa oo la maxkamadaynayo | Somaliska
Waxaa maxkamad ku taala magaalda Örebro la soo taagay ninkii ugu kufsiga badnaa taariikhda Sweden. Ninkaan ayaa lagu eedeeyay in uu geystay ku dhawaad 15 dambi oo la xiriira kufsi iyo weeraro lagu qaaday dumarka. Ka dib markii la xiray sanadkii la soo dhaafay ayaa weerarada lagu qaaday dumarka ay aad u yaraadeen. Ninkaan ayaa qirtay weerada uu ku qaaday 15ka dumarka ah ayadoo weeraradaas ay dheceen intii u dhaxeysay 2005-2010. Ninkaan 24 jirka ah ayaa sheegay in dabeecadaan uu ka dhaxlay ka dib markii uu badsaday daawashada filimaanta xun xun ee internetka asagoo sheegay in aysan u suurto galin in uu gabar saaxiiba yeesho. Ninkaan ayaa sheegay in uu si ciyaar ciyaar ah u daba raaci jiray dadka ilaa markuu jirsaday 13 sano asagoo markii ay waalidiintiis is fureen ka dhacay nolosha Bulshada oo iskuulkana ka haray. Raacitaankaas ayuu ku sameynayay dumarka uu kufsaday asagoo kor ka raaca oo markii meel aan dad joogin ku hela kufsaday. Waxa uu kufsaday dumar da' walba leh oo ay ugu weyneyd haweeney 64 jir ah iyo kuwo dhalinyaro ah. Booliska ayaa qarash iyo dad badan ku bixiyay helintaanka ninkaan ayagoo sheegay ilaa markii ay soo xireen in ay istaagtay kufsiga lagula kaco dumarka ee ka dhaca magaalada Örebro.
Waxaa maxkamad ku taala magaalda Örebro la soo taagay ninkii ugu kufsiga badnaa taariikhda Sweden. Ninkaan ayaa lagu eedeeyay in uu geystay ku dhawaad 15 dambi oo la xiriira kufsi iyo weeraro lagu qaaday dumarka. Ka dib markii la xiray sanadkii la soo dhaafay ayaa weerarada lagu qaaday dumarka ay aad u yaraadeen.
Ninkaan ayaa qirtay weerada uu ku qaaday 15ka dumarka ah ayadoo weeraradaas ay dheceen intii u dhaxeysay 2005-2010.
Ninkaan 24 jirka ah ayaa sheegay in dabeecadaan uu ka dhaxlay ka dib markii uu badsaday daawashada filimaanta xun xun ee internetka asagoo sheegay in aysan u suurto galin in uu gabar saaxiiba yeesho.
Ninkaan ayaa sheegay in uu si ciyaar ciyaar ah u daba raaci jiray dadka ilaa markuu jirsaday 13 sano asagoo markii ay waalidiintiis is fureen ka dhacay nolosha Bulshada oo iskuulkana ka haray. Raacitaankaas ayuu ku sameynayay dumarka uu kufsaday asagoo kor ka raaca oo markii meel aan dad joogin ku hela kufsaday.
Waxa uu kufsaday dumar da’ walba leh oo ay ugu weyneyd haweeney 64 jir ah iyo kuwo dhalinyaro ah. Booliska ayaa qarash iyo dad badan ku bixiyay helintaanka ninkaan ayagoo sheegay ilaa markii ay soo xireen in ay istaagtay kufsiga lagula kaco dumarka ee ka dhaca magaalada Örebro.
Wa arin wanagsan qabashada ninkan danbiil ah wana sodhaweyneyna arintas wana in cidanka police laga gacansiyo soqabashada danbilayasha cidkasta iyo diinkasta ha heyste